Zvapupu zvaJehovha Munyika dzekuAmerica
Kupinda Chirangaridzo—Chishanu, 3 April 2015
Brazil: Valdira achidzidza Bhaibheri achiona nekenduru uye achishandisa foni yake
VANOGARAMO 982 501 976
VAPARIDZI 4 102 272
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 4 345 532
Kuona Nekenduru Pakudzidza Bhaibheri Ari Musango
Mumwe murume nemudzimai avo vanoshanda semapiyona chaiwo kundima iri kwayo yega muBrazil, vakanzwa nezvemumwe mukadzi anonzi Valdira uyo ainge ambodzidza Bhaibheri makore 13 akanga apfuura. Pashure pekufamba nemugwagwa usina tara une huruva uye une mazambuko ane ngozi, mapiyona acho akaonana naValdira uyo aida chaizvo kuenderera mberi nekudzidza Bhaibheri. Sezvo aigara kunzvimbo iri kwayo yega, paifanira kurongwa kuti odzidziswa sei Bhaibheri. Kunyange zvazvo Valdira aiva nefoni, aingokwanisa kubata network kusango, kure nekwaaigara. Uyewo, Valdira aingokwanisa kudzidza kana 9 dzemanheru dzapfuura. Chimbozvifungidzira: Mukadzi wechidiki akagara ega musango usiku, achishandisa foni yake pakudzidza Bhaibheri achiona nekenduru.
Valdira anoteererawo misangano yemusi weSvondo pafoni yake. Anoenda kunoiteerera kusango aine Bhaibheri rake, Nharireyomurindi nebhuku rake renziyo. Kana kuchinaya anoenda neamburera yake.
Muna March, Valdira akafamba mamaira 60 kuenda kuImba yoUmambo yeko kuti anopinda musangano unokosha pakabudiswa Shanduro Yenyika Itsva yakadzokororwa yechiPortuguese. Akafara chaizvo paakapiwa Bhaibheri iri idzva. Hama nehanzvadzi padzaimurumbidza nekushanda nesimba kwaaiita kuti adzidze Bhaibheri, Valdira akati, “Aaa, hazvina kumbooma mufunge!”
“Ndaiziva Kuti Rimwe Zuva Muchasvika Pano”
Vanhu verudzi rwechiYukpa avo vanogara kuColombia, ndevamwe vemarudzi akatanga tanga kugara kuAmerica. Mumwe piyona chaiye paaida kuenda kune imwe nharaunda yevanhu ava, akaudzwa kuti angwarire mambo weko anonzi John Jairo, nekuti ainge ambodzinga vanhu vemamwe machechi vaida kuparidzira ikoko. Rimwe zuva John paakaona kuti mumwe wevanhu vemachechi aya aitora chegumi, akamudzingirira achiridzira pfuti yake mudenga.
Colombia: Piyona chaiye anonzi Frank achidzidza Bhaibheri neboka revanhu verudzi rwechiYukpa
Frank anoti: “Patakasvika munharaunda yacho, munhu akatotanga kutiteerera aiva mumwe wevanasikana vaJohn Jairo! Patakamuratidza bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? akabva ati, ‘Iyi ndiyo chechi yandinoda kupinda!’ Akabva amhanya kunoudza baba vake nezvekusvika kwedu. Baba vacho vakabva vatishevedza. Takanosangana navo takabatira ura mumaoko. Tisati tatombotaura chero chii zvacho, vakabva vati: ‘Ndinozviziva kuti chitendero chenyu ndicho chechokwadi. Makore 8 apfuura, ndakaona bhuku rakaita seramapa mwanasikana wangu riri munorasirwa marara kuBecerril. Ndakariverenga, uye kubva ipapo ndanga ndakamirira kuti muuye kuno. Ndaiziva kuti rimwe zuva muchasvika chete. Ndinoda kuti mundidzidzise Bhaibheri, ini nemhuri yangu, nevanhu vari munharaunda ino. Sunungukai kuparidzira vanhu vese.’
“Mashoko iwayo akatibata-bata zvekuti takaita setichachema. Vanhu vemunharaunda yacho vese vakaungana vachiteerera mashoko ataiparidza, uye John Jairo aishandurira zvataitaura mumutauro wavo. Tava kuenda, akatipa dhongi kuti titakure zvinhu zvedu. Iye zvino tava kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri 47 zvine vanhu 120 verudzi rwechiYukpa vanobva kunharaunda dzakasiyana-siyana, kubatanidza John Jairo nemwanasikana wake.”
Munhu Aitambudza Zvapupu Anochinja
José anogara kuEcuador ainge akanyura muchechi yeRoma. Akanyora kuti: “Ndaivenga Zvapupu zvaJehovha kusvika pekupedzisira. Ndakaita makore 10 ndichivatambudza. Ndaivarongera mhomho, ndaivarova, uye ndaivapomera kuti imbavha. Pavaisvika kukamba yemapurisa, ndaisimbirira kuti nditokiya chitokisi chacho ndirini. Pamwe pacho takatoparadza mota yechimwe Chapupu. Pane imwezve nguva, takakanda mudhudhudhu wechimwe Chapupu kumawere akadzika chaizvo.
“Muna 2010, ndakabatwa neswine flu. Chiremba wangu akandiudza kuti ndimbotama kubva kunharaunda yemakomo eAndes kwandaigara uye kuti ndinogara kunzvimbo inoti dziyei iri pedyo negungwa kuti ndipore. Ndakaenda kunogara pane rimwe purazi diki rehama yangu riri pedyo negungwa uye ndini ndakatozopedzisira ndava kuchengeta purazi racho. Ndaingova ndega papurazi racho, saka ndaida chaizvo kuwana munhu wekutaurawo naye. Munoziva kuti ndiani akabva auya papurazi racho? Zvapupu zvaJehovha ndizvo zvakauya! Semunhu ainge akasurukirwa, ndakangoti regai ndikurukure navo, uye ndakashamiswa nekutsanangura kwavakaita Bhaibheri. Sezvo ndaida kunzwa zvakawanda, ndakabvuma kudzidza Bhaibheri. Pashure pekudzidza Bhaibheri kwemwedzi 6, ndakapinda misangano kekutanga. Ndakashamiswa chaizvo nekundifarira kwavaiita uye mutsa wavakandiratidza zvekuti ndakati nechemumwoyo, ‘Kuti vangangodaro vari ivo vashumiri vaMwari vechokwadi?’ Ndakafambira mberi mune zvekunamata uye ndakazobhabhatidzwa muna April 2014.
“Ndakazvidemba chaizvo kuti ndainge ndatambudza Zvapupu. Asi Jehovha akandipa mukana wekuti ndichinje maitiro angu. Pagungano redunhu rakaitwa musi wa4 October 2014, ndakaenda pachikuva ndichibvunzwa nezvekutambudza kwandaimboita Zvapupu. Mumwe mubvunzo wandakabvunzwa ndewekuti, ‘Kudai maizowana mukana wekukumbira ruregerero kune mumwe wevanhu vamakatambudza, ndiani wamaizokumbira?’ Ndakabva ndangopindura kuti ndeimwe hama inonzi Edmundo, asi ndakanga ndisingazivi kuti ndingamuwana sei. Handina kumboziva kuti mutariri wedunhu akanga auya naye kuseri kwechikuva. Vanhu vaiteerera gungano racho vakabudisa misodzi ini naEdmundo patakambundirana tichichema tiri pachikuva.”
“Jehovha, Ndinokumbirawo Kuonana neZvapupu Zvenyu”
Paraguay: Mukadzi akabvunza hanzvadzi kuti dzaiva Zvapupu zvaJehovha here
Akanga ari masikati zuva richipisa, kuAsunción, Paraguay, vamwe vaparidzi pavakanga vapedza kuparidzira ndima yavakanga vapiwa. Vaparidzi vacho vakabva vafunga kunoparidzira dzimba shoma dzaiva pedyo. Mumwe wavo akati, “Zvimwe pane munhu ari kutonyengetera kuti timushanyire.” Pane imwe imba yaiva pakona, mumwe mukadzi akanga akamira padhoo akakwazisa vaparidzi vacho achinyemwerera ndokuvabvunza kuti vaiva Zvapupu zvaJehovha here. Mukadzi wacho akabva avaudza kuti mwedzi wakanga wapfuura akanga atama kubva kuBolivia kuuya kuParaguay nemhaka yebasa. Aimbodzidza Bhaibheri asati abva kuBolivia. Vavakidzani vake vakanga vasingazivi kuti Zvapupu zvaiwanika kupi, saka akanyengetera kuti, “Jehovha, ndinokumbirawo kuonana neZvapupu zvenyu.” Musi iwoyo chaiwo, vaparidzi vaya ndipo pavakabva vasvikawo pamba pake ndokuronga kudzidza naye Bhaibheri.